एउटा जीवन: यसलाई साझेदारी गर्नुहोस् — यात्रा ली - आधिकारिक साइट
एउटा जीवन: यसलाई साझेदारी गर्नुहोस्
सप्ताह को एक जोडी पहिले, म evangelize हरेक विश्वासीले जिम्मेवारी बारेमा परिसर आउटरीच राष्ट्रीय सम्मेलन मा कुरा. मेरो पाठ थियो2कोरिन्थी 5:18-21. यहाँ सत्र देखि भिडियोको.
एउटा जीवन | यसलाई साझेदारी गर्नुहोस् – यात्रा ली बाट परिसर आउटरीच मा Vimeo.
तपाईं इच्छुक हुनुहुन्छ भने, यहाँ म साथै एक भाग थियो एक प्यानल छलफल बाट भिडियो. छलफल परिसर सेवाको थियो, स्थानीय चर्च, महान् आयोग, आदि:
Pastors प्यानल बाट परिसर आउटरीच मा Vimeo.
प्लस, म तपाईंलाई बाहिर जाँच गर्न सिफारिस सबै अन्य मिडिया यो सम्मेलन बाट. त्यहाँ ठूलो शिक्षा को टन म edifying हुन फेला छौँ लाग्छ भन्ने थियो.
Michaella • अगस्ट 19, 2013 मा 8:22 छु • जवाफ
म त्यहाँ थिए!!! तपाईं भयानक थिए!
परमेश्वरको आशिष् दिनुहुन्छ!
जेसिका Dunson • अगस्ट 19, 2013 मा 8:22 छु • जवाफ
यो सन्देश बाँड्नु भएकोमा धन्यवाद. म मेरो आफ्नै विश्वविद्यालयमा अन्यसँग उहाँको सुसमाचार साझेदारी बारे परमेश्वरले पुष्टि आवश्यक र म यो सन्देश मार्फत यसलाई प्राप्त. म साँच्चै यो आवश्यक. परमेश्वरको आशिष.
Adrienne केली • अगस्ट 19, 2013 मा 8:23 छु • जवाफ
ब्राड बल • अगस्ट 19, 2013 मा 8:23 छु • जवाफ
Olli Pamplin • अगस्ट 19, 2013 मा 8:23 छु • जवाफ
यो साझेदारी धेरै धन्यवाद, म साँच्चै सुन्न आवश्यक.